Raclette waxay isku dubaridaa cuntada iyo xiriirinta qoysaska iyo asxaabta
Raclette wuxuu isku daraa cuntada iyo qashinka
Dad badan ayaa ogyihiin oo jecel - jilicsanaanta
Raclette, cuntada on saxan kulul ama dhagax kulul la digsiyada baahisey maqlay sanado badan xisbiga caan ah ku dhacay. Laakiin ma aha oo kaliya loogu talagalay raclette xisbiga ayaa sidoo kale ku haboon yahay fiid ah guriga qoyska dhafan waayo fiidkii la saaxiibo in sanadka cusub ama dhalashada iyo jeer kale oo weli badan cuntada la saxan kulul dhexe ee miiska loo jecel yahay.
Raclette - cuntada caanka ah iyo kuwa gaarka ah
Laakiin maxaa ka dhigaya nooca cunnada noocan ah ee caan ah? Raclette waa la cuni karaa labadaba qadada iyo fiidkii. Waa mid ku haboon cimilada qabow ee gudaha, laakiin sidoo kale xagaaga beerta, dabaqa ama baaldiga jilicsan ayaa la isticmaali karaa. Quruxda halkan waa bulsho ahaaneed iyo miyir-qabka, raaxo shakhsi ahaaneed.
Si wada jir ah u wada cun
Diyaargarowga loogu talagalay jilidaha waa mid aad u fudud, sababtoo ah ururinta dhabta ah waxay ku dhacdaa "cunaha" oo kaliya si toos ah miiska. Qof kasta oo cunsuriyadeer ah wuxuu soo qaataa cuntadiisa, kaas oo uu rabo inuu geliyo jilbaha ama ku rido digsiyada.
Raclette sidoo kale for vegetarians
Hadday yihiin vegans, hilibka, hilibka, kalluunka ama sausage wax cunaya, halkan qof kastaa wuxuu helaa cuntada uu jecel yahay. Wax walba waa suurtagal inta lagu jiro diyaarinta. Mid ka mid ah xaddidaadda cuntada la rabay horayba ha ahaato digsiyada horay ama "bakeeriyaha wax lagu cuno" ayaa goosanaya cuntada uu rabo.
In qallalku digsiga badan oo dhan dhadhankii, in hadhuudh, hilib doofaar, basasha, likaha, haley, dhir, khudaarta, gogo 'yar oo hilib ama bolse, toon - liiska la cayimin sii wadan-lahaa. Normal Cuntadan digsi waxaa dubay oo jiis raclette ah, laakiin kulul oo keliya oo aan la dubay waa suurto gal.
Waxyaabaha muhiimka ah ee noocan ah ee diyaargarowga waa bulsho ahaan. Qofna kuma fadhiya miiska isagoo aan erey iyo cuno. Sababtoo ah diyaarinta tooska ah ee miiska waxaa jira fursado iyo wakhti badan oo lagu hadlo, taas oo ka dhigaysa jilbaha si aad u caan ah gaar ahaan shirkadaha waaweyn ama qoyska.
Ma jiraan xeerar adag oo loo diyaar garoobayo laakiin waxaa jira waxyaabo kale oo lagu fiirsan karo jilid. Raclette macnaheedu waa diyaargarowga miiska, taas oo ah - maaddooyinka waa in aysan laheyn cunto karis ama waqti dheer.
Intaa waxaa dheer, cuntada waa inaysan bixinin biyo badan ama waxay u baahan tahay baruur si loogu diyaariyo. Xaaladdan oo kale, waxaa lagu talinayaa in la kariyo ka hor ama la dubo cuntada, ka dibna kuleylka oo kaliya kuleylka jilicsan.
Inkasta oo qof walbana uu u fadhiisto miiskiisa, cunto kariska oo isku-dhafan oo ku yaal daboolka sare ama saxanka. Cuntadani waa mid xiiso leh dhammaan da 'kasta. Si aad uhesho suugo kala duwan, saladh, dips ama qaniinyo kale.
raclette The ma aha oo kaliya delicious ahayeen carafta, waxa ay sidoo kale ku fidaa diirimaad. Maxaa badan oo aadan aqoon ama aan weli lala iman lahaa fikradda - foomkan of karinta ku haboon yahay soo diyaarinta cuntada iyo macmacaan macaan la diyaarin karaa qalabka qoyska diesm ma aha oo kaliya.
Isku fariis oo wada cun
Tusaale ahaan, berde oo leh malab iyo jiis cream ayaa la diyaarin karaa, ama Nutella ayaa la kulmi karaa muuska. Aragtidu ma laha xaddidaad lagu cuno sidan.
Haddii aadan jeclayn jiiska jiiska caadiga ah ee Raclette, waxaad sidoo kale xayeysiin kartaa gawaarida Gauda, ​​Edammer ama Mozarella, sidaa daraadeed, halkan, sidoo kale, ma jirto xadka maskaxdaada.
Nooc cusub oo ka mid ah jilbaha waa qalabyo leh fondue integrated
Dhexdhexaad ka mid ah jilbaha waxaa lagu darayaa dheriga fondue. Kala duwanaanshaha iyo fursadaha ayaa halkan mar kale ka weyn. Muujinta jilidku waa mid hore u sii weynaa laakiin caansanaantu ma joojineyso, iyo sabab la'aan.
Meel kale oo kale dhadhan badan oo kala duwan ayaa la midoobi karaa isla markaana si isku mid ah u fadhiisanaya miiska oo la cuno jawi saaxiibtinimo leh, sida hore loogu soo sheegey, madadaalada kuma filna. Halkan ma aha oo kaliya waa la cunaa, laakiin shirkaddu waxay runtii ku raaxeeysatay.
Cunto salad baradho ah Cuntada iyo cabitaanka
Bogagga cabbista cabbitaanka kafeega
Cabitaanada Wabiga ee Degmada